Horudhac: Levante vs Real Madrid… (Los Blancos oo doonaysa inay gaarto guusheedii saddexaad oo xiriir ah horyaalka La Liga) – Gool FM
(Valencia) 04 Okt 2020. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa u jeedkeedu yahay inay gaarto guusheedii saddexaad oo xiriir ah horyaalka La Ligaha Spain marka ay u safrayaan galabta oo Axad ah Magaalada Valencia, halkaasoo ay kula soo ciyaari doonaan naadiga Levante.
Los Blancos ayaa uruusatay todobo dhibcood saddexdeedii kulan ee ugu horreeyey oo ay ciyaartay horyaalka La Liga kal ciyaareedkan, waxaana ay fadhisaa kaalinta afaraad ee kala sarreynta horyaalka Spain, iyadoo dhibcaha la wadaagta labada kooxood ee ka hooseeya kuwaasoo kala ah, Valencia iyo Getafe.
Kooxda uu hoggaamiyo Tababare Zinedine Zidane ayaa kulankan galabta garoonka galaya iyagoo xusuusan inay guul dirqi ah ka soo qaateen Arbacadii naadiga Real Valladolid oo ay 1-0 uga soo adkaadeen iyagoo guushaas uga mahadcelinaya Vinicius Junior oo goolkaas madiga ah u dhaliyey Los Blancos daqiiqaddii 65-aad ee qeybtii dambe ee ciyaarta.
Tababare Paco Lopez ayaa la filayaa inuu xoogaa isku shaandheyn ah sameeyo kaddib guuldarradii todobaadkan ka soo gaartay kooxda Sevilla.
Mickael Malsa iyo Nikola Vukcevic ayaa ku soo bilaaban kara bartamaha garoonka, halka Dani Gomez xitaa laga yaabo inuu ku soo bilowdo safka hore.
Carlos Clerc ayaa la filayaa in laga door-bido Tono oo ka ciyaara garabka bidix ee daafaca, halka Ruben Vezo ay tahay inuu ka soo muuqdo daafaca dhexe ka hor Robert.
Eder Militao ayaa wali shaki laga qabaa dhaawaciisa uu kaga maqan yahay kooxda martida ah, taasoo la micno ah in Sergio Ramos iyo Raphael Varane ay u baahan doonaan inay sii wataan ka ciyaarista daafaca dhexe.
Ferland Mendy waa inuu ku soo bilowdaa daafaca bidix ka hor Marcelo, iyadoo Tababare Zinedine Zidane uu u baahan yahay inuu si taxadar leh u maareeyo daqiiqadaha ciyaartoydiisa.
Martin Odegaard iyo Fede Valverde ayaa labadoodaba la rajeynayaa inay ku soo bilowdaan khadka dhexe, inkastoo Marco Asensio uu sidoo kale diyaar yahay kaddib markii uu ka soo kabsaday dhaawac yar oo soo gaaray isbuucii hore.
>- Kaliya saddex ka mid ah 20-kii is-arag ee ugu dambeeyey oo ay labadaan kooxood isku wajaheen ayaa ku dhammaaday barbaro.
>- Kulankoodii ugu dambeeyey ee labadaan kooxood dhexmara waxa uu ku dhammaaday 1-0 ay ku adkaatay kooxda garoonkeeda lagu ciyaarayey ee the Granotas.
>- Labada kooxood ayaan goolal iska dhaliyey lix ka mid ah todobadoodii kulan ee ugu dambeeyey.
>- Los Blancos ayaa khasaaro la kulantay kaliya mid ka mid ah todobadeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay booqasho ahaayeen ama marti.
>- Kooxda Real Madrid ayaa guuleysatay 12 ka mid ah 14-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay horyaalka La Liga.
Horudhac: Manchester United vs Tottenham Hotspur… (Macallin Jose Mourinho oo dib ugu laabanaya garoonka Old Trafford)